ရုတ်တရက် နှလုံးရပ်ကာ နေအိမ်မှာတင်ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်ရဲ့ကောင်မလေး – Cele Posts
ရုတ်တရက် နှလုံးရပ်ကာ နေအိမ်မှာတင်ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်ရဲ့ကောင်မလေး
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီကာလကြီးမှာ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် သေဆုံးနေကြသူတွေရဲ့ သတင်းစုံကို နေ့စဉ်ကြားနေ ရပါတယ်နော်။ ဒီနေ့မှာလည်း သရုပ်ဆောင် ညီထွဋ်ခေါင်ရဲ့ ချစ်သူ နှလုံးရပ်ပြီး နေအိမ်မှာပဲ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်နော်။ သူမကွယ်လွန်ချိန်မှာ ညီထွဋ်ခေါင်ဟာ ရှောင်တိမ်းနေရတဲ့အတွက် အနားမှာ မရှိပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးနော်။
ညီထွဋ်ခေါင်ရဲ့ သူငယ်ချင်း အရင်းကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦးနဲ့ ကျော်ကျော်တို့ ကလည်း ရုတ်တရတ် ကွယ်လွန်သွားတဲ့ မမေအတွက် ဝမ်းနည်းနေကြောင်း စာရေးသားပြီး အသီးသီး တင်ထားကြပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်ကျော်ကျော်က ” မောင်လေး ချစ်ရတဲ့မမေ…ဒီပုံလေးဟာ နောက်ဆုံးရိုက်ယူခဲ့မိတဲ့ ပုံလေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့မိဘူးဗျာ…အပူတေများတဲ့ လောကကြီးကနေ ငြိမ်းချမ်းစွာ အိပ်စက်အနားယူ ပါတော့နော်R. I. P”လို့ သူရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်းရေးသားထားပါတယ်နော်။
ဆုမြတ်နိုးဦး ကလည်း ” မမေရယ် မယုံနိုင်သေးဘူး..နောက်နေတာပဲဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမိတယ် ..မီးရေ လို့ခေါ်ပီးပြန်ထလာ မလားလို့မျှော်လင့်မိတယ် ..သိပ်ချစ်တတ်တဲ့မမေ .. သိပ်စိတ်ပူတတ်တဲ့မမေ.. ခုတော့အားလုံးကိုစိတ်ချပီး ထွက်သွားသလား 😭မမေချစ်တဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ရင်ခွင်မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူနှင့်ပါတော့မမေရေ 💔💔💔” လို့ ရေးသားထား ပါတယ်နော်။သရုပ်ဆောင် ညီထွဋ်ခေါင်ရဲ့ချစ်သူ မမေလည်း ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာမှာ အနားယူနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
ရုတျတရကျ နှလုံးရပျကာ နအေိမျမှာတငျကှယျလှနျသှားပွီဖွဈတဲ့ ညီထှဋျခေါငျရဲ့ကောငျမလေး
ပရိသတျကွီးရေ ဒီကာလကွီးမှာ အကွောငျး အမြိုးမြိုးကွောငျ့ သဆေုံးနကွေသူတှရေဲ့ သတငျးစုံကို နစေ့ဉျကွားနေ ရပါတယျနျော။ ဒီနမှေ့ာလညျး သရုပျဆောငျ ညီထှဋျခေါငျရဲ့ ခဈြသူ နှလုံးရပျပွီး နအေိမျမှာပဲ ကှယျလှနျသှားခဲ့ပါတယျနျော။ သူမကှယျလှနျခြိနျမှာ ညီထှဋျခေါငျဟာ ရှောငျတိမျးနရေတဲ့အတှကျ အနားမှာ မရှိပေးနိုငျခဲ့ပါဘူးနျော။
ညီထှဋျခေါငျရဲ့ သူငယျခငျြး အရငျးကွီးတှေ ဖွဈတဲ့ ဆုမွတျနိုးဦးနဲ့ ကြျောကြျောတို့ ကလညျး ရုတျတရတျ ကှယျလှနျသှားတဲ့ မမအေတှကျ ဝမျးနညျးနကွေောငျး စာရေးသားပွီး အသီးသီး တငျထားကွပါတယျနျော။ သရုပျဆောငျကြျောကြျောက ” မောငျလေး ခဈြရတဲ့မမေ…ဒီပုံလေးဟာ နောကျဆုံးရိုကျယူခဲ့မိတဲ့ ပုံလေးဖွဈလိမျ့မယျလို့မထငျခဲ့မိဘူးဗြာ…အပူတမြေားတဲ့ လောကကွီးကနေ ငွိမျးခမျြးစှာ အိပျစကျအနားယူ ပါတော့နျောR. I. P”လို့ သူရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာလညျးရေးသားထားပါတယျနျော။
ဆုမွတျနိုးဦး ကလညျး ” မမရေယျ မယုံနိုငျသေးဘူး..နောကျနတောပဲဖွဈပါစလေို့ ဆုတောငျးမိတယျ ..မီးရေ လို့ချေါပီးပွနျထလာ မလားလို့မြှျောလငျ့မိတယျ ..သိပျခဈြတတျတဲ့မမေ .. သိပျစိတျပူတတျတဲ့မမေ.. ခုတော့အားလုံးကိုစိတျခပြီး ထှကျသှားသလား 😭မမခေဈြတဲ့ ဘုရားသခငျရဲ့ရငျခှငျမှာ ငွိမျးခမျြးစှာအနားယူနှငျ့ပါတော့မမရေေ 💔💔💔” လို့ ရေးသားထား ပါတယျနျော။သရုပျဆောငျ ညီထှဋျခေါငျရဲ့ခဈြသူ မမလေညျး ငွိမျးခမျြးတဲ့နရောမှာ အနားယူနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။
ပြည်သူတွေ လွယ်လွယ်နဲ့ မြန်မြန်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် အောက်စီဂျင် Concentrator တွေကိုလည်း လှူဒါန်းပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ နန္ဒာလှိုင်